I-WV iqinisekise cishe amacala amasha we-COVID-19 amasha, izifunda ezintathu zibomvu | I-WDVM25 & DCW50
Isikhathi Iposi: Jun-22-2021
ICharleston, West Virginia (WOWK) - Njengoba umbuso ubike cishe amacala amasha angama-500 e-COVID-19, izifunda ezintathu manje zikhonjiswe ngombala obomvu kumephu yesistimu yokuqwashisa esifundeni saseWest Virginia. UMnyango wezeMpilo kanye nabasebenzi eWest Virginia ukuqinisekisile amacala amasha angama-495 we-COVID-19 emahoreni angama-24 edlule. ...Funda kabanzi »
Isikhathi Iposi: Apr-02-2021
Emlandweni waseChina, amaShayina asebenzisa ucelemba njengesikhali sempi, futhi ucelemba ubusetshenziswa kuyo yonke iminyaka, kanti ukusikwa nokushiswa kuyincazelo yendima ebalulekile yocelemba ezikhathini zasendulo. Njengoba izikhathi ziqhubeka, ucelemba wathathelwa indawo imishini esezingeni eliphakeme, kepha ...Funda kabanzi »
Insimbi yeCarbon yinto yendabuko esetshenziselwa ukwenza ama-machete blade. I-Carbon ifakwa ku-iron ukunika amandla wensimbi nokwandisa ubulukhuni be-alloy, kepha ukwandisa okuqukethwe kwekhabhoni nakho kwenza insimbi ibe brittle. Insimbi yeCarbon ibilokhu ikhona ngaphezu kweminyaka engama-4,000. Ukusetshenziswa kwe-carbo ...Funda kabanzi »
Ungayinakekela Kanjani Nokunakekela iMachete Yakho
UKUNAKEKELWA KWE-BLADE Njengamanje insingo ka-machete ethengiswa kakhulu futhi isetshenziswe kahle yi-High Carbon Spring Steel, i-Gemlight machete isebenzisa i-High carbon spring steel nge-Mn eyenziwe ngcono. Kepha ama-carbon steel blades agqekeqeke kalula, futhi kufanele njalo ambozwe ngongqimba olula wamafutha ukuvimbela ukugqwala. Uwoyela uvimbela umswakama ...Funda kabanzi »